LibreOffice 6.2.3 Kuburitswa: inopfuura makumi mapfumbamwe emabhugi akagadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.2.3 Kuburitswa: inopfuura makumi mapfumbamwe emabhugi akagadziriswa
The Document Foundation inozivisa kuburitswa kutsva, yechitatu yekugadzirisa inogadziridza yazvino LibreOffice 6.2 vhezheni. Iyi ndiyo LibreOffice 6.2.3 yaunogona kuisa pane yako yaunofarira GNU / Linux distri kuti ugone kunakidzwa nenhau dzese dzinounzwa neiyi nyowani vhezheni yeanonyanya kufarirwa emahara ehofisi suite. Mariri muchawana nhau dzinonakidza dzatiri kuzotaura nezvazvo uye izvo zvichabatsira mamirioni ezvikwata izvo zvatove kushandisa iyi yemahara software.
LibreOffice 6.2.2 yatove nezvakawanda zvakagadziriswa uye zvimwe zvigadziriso, asi izvozvi vagadziri vakaramba vachishanda nesimba kuti vafambire mberi nekuratidzwa kufambira mberi uye kugadzira LibreOffice 6.2.3 ine huwandu hweshanduko makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, ine anopfuura makumi mapfumbamwe emabhugi akagadziriswa. Dzimwe shanduko dzinozoita kuti ruzivo neLibreOffice rive rakatsiga, rinogutsa uye rakavimbika. Chinhu chinokosheswa kusimudzira kugadzirwa.
Nekudaro, LibreOffice 6.2.3 haisi vhezheni yakanyatsogadziriswa, yakagadzikana uye yakasimba, sezvo iri yakanangana nevashandisi vekumba. Vose avo vanoda suite yakawanda yakagadziridzwa, yakagadzikana uye yakasimba munzvimbo dzemabhizinesi zvinogona nani kusarudza iyo vhezheni LibreOffice 6.1.5. Asi kana izvo zvauri kutsvaga iri nhau dzichangoburwa dziripo, nekuda kwekuti hazvishandiswe nehunyanzvi, unogona kutomboedza iyi yazvino vhezheni paLinux, macOS, Windows mapuratifomu.
La inotevera inovandudzwa inotarisirwa kupera kwaMay, nekusvika kweLibreOffice 6.2.4. Vakomana vacharamba vachishanda nesimba kuti isu tirambe tichiona kufambira mberi kukuru. Kana iwe uchida kurodha pasi uye nekuisa LibreOffice, unogona kushandisa mamaneja epakeji ewaunofarira distro, kunyange hazvo asiri ese ma repos anozo gadziridzwa kune yazvino vhezheni. Kana iwe uchida yazvino vhezheni, ini ndinokukoka iwe kuti upinde mu webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Ikoko iwe unogona kurodha muhofisi suite uye zvimwe zvekuwedzera zvishongedzo, senge maAddons, dudziro yeiyo interface, nezvimwe, pamwe nekuwana kuwanda kweruzivo uye zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 6.2.3 Kuburitswa: inopfuura makumi mapfumbamwe emabhugi akagadziriswa
Chikumbiro chekuronga yedu yehunyanzvi uye yehupenyu hupenyu kubva kune Linux desktop
Makore gumi nemashanu eCentOS uye kuvhurwa kweCentOS 15 kwatova mumabasa